प्रदेश २ मा जोगाउला कांग्रेसले साख ? शीर्ष नेता संयुक्त प्रचारमा - Samudrapari.com
प्रदेश २ मा जोगाउला कांग्रेसले साख ? शीर्ष नेता संयुक्त प्रचारमा
११०० पटक हेरिएको
काठमाडौं – पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पहिलो बन्नबाट चुकेको छ । पछिल्लो समय पार्टीमा नीति तथा सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति हावी हुँदा स्थानीय निर्वाचनमा हार व्यहोर्नु परेको पार्टीकै नेताहरु बताउंछन् ।
आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने तेस्रो चरण स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल बन्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । उसो त, प्रदेश नम्बर २ कांग्रेसको राजनीतिक कर्मथलोका रूपमा परिचित छ । तर पनि पार्टीभित्रको अन्तरघातले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा यो साख जोगाउन उसलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । ७ दशकअघि विधिवत रूपमा स्थापित कांग्रेस प्रदेश २ मा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न सफल होला ? अहिले यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
असोज २ मा यो प्रदेशका एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तहले आफ्ना प्रनिधिनि छनोट गर्नेछन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १९ निर्वाचित र १८ समानुपातिक गरी कुल ३७ कांग्रेसी सभासद्ले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र यो प्रदेशबाट कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित १३ केन्द्रीय सदस्यले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
२००७, २०४६ र २०६२-०६३ को जनआन्दोलन सफलतामा पनि यो प्रदेशका नेताको अग्रणी भूमिका रहेको कसैबाट छिपेको छैन । मधेसलाई कांग्रेस इतिहासकोे कर्मभूमि नै मान्छन् मधेसी जनता ! उनीहरूको भावनामा ठेस लाग्दा मलमपट्टि लगाउने काम कांग्रेसले गर्दै आएको बुझाइ त्यहाँका जनतामा रहदै आएको छ । त्यही विश्वासको जगमा असोज २ को निर्वाचनमा कांग्रेस बलियो हुने केहीको विश्वास पनि छ । मधेसी जनताको भावनामा ठेस लाग्दा मलमपट्टि लगाउने काम कांग्रेसले गर्दै आएकाले असोज २ को निर्वाचनमा पहिलो हुने कांग्रेसको दाबी छ ।
अहिले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन प्रचारमा केन्द्रित नेता कार्यकर्ता एउटै स्वरमा भन्छन्, ‘असोज २ पछि अन्तर्घात सदाका लागि बढारिनेछ र गुमेको साख फिर्ता गर्दै कांग्रेस पहिलो हुनेछ ।’
कांग्रेस पदाधिकारीसहितका शीर्ष नेता प्रदेश नम्बर २ मा सक्रियतापूर्वक चुनावी प्रचारमा लागेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताकै उपस्थितिमा मधेसमा ठूला चुनावी सभा गरिरहेको छ ।
हिजो सप्तरी र सिरहामा भएको सभालाई सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताको ३० भदौसम्म आठवटै जिल्लामा कांग्रेसको पक्षमा चुनावी माहोल बनाउने गरी कार्यक्रम र भेटघाटको कार्यक्रम बनाइएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आज बिहानैबाट शीर्ष नेताको व्यस्त सूची छ । बिहान धनुषा र महोत्तरीका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँग भेट गर्नु भएको छ । त्यसपछि सभापति, नेता पौडेल र महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित केन्द्रीय नेताहरूले महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नु भएको छ । उहाँहरु आजै जनकपुरधाममा आयोजना हुने आमसभामा सहभागी हुनुहुनेछ ।
सो सभापछि शीर्ष नेताहरूको टोली महोत्तरीको बर्दिवास जानेछ । बर्दिवासमा अपराह्न ४ बजे चुनावी सभा राखिएको छ । सभालाई शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन् । भोलि (बिहीबार) कांग्रेस शीर्ष नेताले सर्लाही र रौतहटका चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । कांग्रेसका अनुसार पर्सि (३० भदौ) बिहान पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, नेता पौडेल र महामन्त्री कोइरालाले बारा र पर्साका कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सोही दिन दिउँसो १ बजे बाराको कलैयामा आयोजना हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन र त्यसपछि सोही दिन पर्साको वीरगन्जमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई अपराह्न २ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । चुनावी सभापछि ३० भदौमा शीर्ष नेताहरू काठमाडौं फर्किनु हुनेछ ।